Ny sarimihetsika HPA's "The Found Lederhosen" "Neo-Bedouin" dia mampiasa URSA Mini Pro 12K | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Ny horonantsary "Neo-Bedouin" an'ny HPA dia mampiasa URSA Mini Pro 12K
Ny horonantsary "Neo-Bedouin" an'ny HPA dia mampiasa URSA Mini Pro 12K
Fremont, CA - 2 april 2021 - Blackmagic Design androany dia nanambara fa ao anatin'ny tetikasa multifilm, "The Found Lederhosen," ho an'ny Hollywood Fikambanan'ny Teknolojian'ny Fikambanana Professional 2021, mpanatontosa sarimihetsika Abeer Abdullah dia namorona "Neo-Bedouin" tamin'ny fampiasana fakantsary URSA Mini Pro 12K sy URSA Mini Pro 4.6K G2.
Mpanentana ny saina, sci Fi / Fantasy, "Neo-Bedouin" manaraka an'i Khalid, injeniera 35 taona, noho ny fanidiana ny areti-mifindra, dia nanary ny fotoana hanehoana teknolojia vaovao hamaha ny krizy angovo eran-tany. Nandritra ny fidirana an-tsehatra ho claustrophobia teo amin'ireo haitao manodidina azy dia nahita boaty iray nisy vavahady nitondra azy tany an'efitra sy niverina izy. Ny horonantsary, notarihin'i Abeer niaraka tamin'ny sinematografikan'i Marc Pascual, dia notifirina tany Dubai, ary niankina tamin'ny URSA Mini Pro 12K. "Ny fananana ny 12K napetraka dia nanome ahy ny fahatokisana ilaina amin'ny safidiko famoronana, indrindra amin'ny effets visuels," hoy i Abeer.
Abeer dia nanatona an'i Joachim "JZ" Zell hanome anjara sarimihetsika amin'ilay tetikasa "Found Lederhosen", ary faly izy nanatevin-daharana ny foto-kevitra eran-tany. "Te-hitondra mikasika ny Moyen Orient ho ao aminy aho," hoy i Abeer. "Te hampiseho ny tany efitra, akanjo sy hizara kolontsaina vitsivitsy avy amin'ny faritra aho." Saingy tiany ihany koa ny tantara ho fampifangaroana tsy manam-paharoa amin'ny haitao maoderina sy ny dia ataon'ny tena manokana. “Nieritreritra ny hanolotra zava-baovao aho, izay mitondra fahatsiarovan-tena amin'ny hetsika Zavakanto & Siansa vaovao eto Dubai, ny eritreritsika, ny finoantsika ary ny fanantenantsika ho avy tsaratsara kokoa, ary aseho azy amin'ny sarimihetsika momba ny vahaolana maharitra izay mifandray amin'ny lovantsika koa. ”
Manana fifankazarana matanjaka Blackmagic Design fakantsary sy siansa loko no nahatonga an'i Abeer sy Pascual hahazo aina avy hatrany tamin'ny fitifirana tamin'ny URSA Mini Pro 12K. "Nahavita tetikasa hafa aho tamin'ny kinova samihafa amin'ny fakantsary," hoy i Pascual. "Tena tsara sy matanjaka ny fampisehoana azon'izy ireo, ka fantatro tsara izay ho azoko amin'ny 12K." Ho an'ny tantara, fantatry ny ekipa fa mila mitantana fepetra henjana izy ireo, manomboka amin'ny fitifirana amin'ny hazavana ambany ka hatrany amin'ny masoandro masiaka any an'efitra.
"Ny hazavana voajanahary no tiako foana," hoy i Abeer, izay nanosika hitifitra sary maro nifindra tamin'ny hazavan'ny andro ka hatramin'ny filentehan'ny masoandro. “Saingy fantatsika rehetra fa ny toerana eny ivelany no tena sarotra. Terena aho handray fanapahan-kevitra haingana amin'ny famoronana, raha toa kosa ny ekipa manery ny hifehy ny fiovana tsy miovaova sy haingana amin'ny zoro, handanjalanja ny fotsy hoditra, ary hanaraka hatrany ny lalan'ny masoandro. Tena natoky tena hanana fakantsary Blackmagic aho satria fantatro hoe aiza no azontsika aleha amin'ilay sary, ary ahoana no hataon'ny siansa loko. ”
Tena zava-dehibe tamin'ny fijerin'ny sarimihetsika ny fitantanana ny toe-javatra miova tsy tapaka, tsy ny famaliana ny jiro miova ihany fa ny fandraisany azy. “I Marc (Pascual) sy izaho dia tena nanosika ny halaviran'ny fakantsary ho an'ny fakantsary nandritra ny fitifirana vohitra iray nilaozana teo afovoan'ny efitra. Faly izahay fa ny antsipiriany dia naseho tamin'ny fomba maizimaizina kokoa rehefa nandeha izahay. "
Raha nitifitra ny sarimihetsika URSA Mini Pro 12K sy ny maodely G2 ny sarimihetsika, ny lakilen'ny 12K dia ny fampiasana ny vahaolana lehibe kokoa hanamorana ny fahitana sary avo lenta. Saingy ny fananana fahaizana mitifitra izany vahaolana avo lenta izany amin'ny fotoana fohy dia nanosika ny famoronana ny sarimihetsika. "Teo am-pivarotana dia nanapa-kevitra ny haka sary malalaka ny mpilalao fototra mipetraka eo ambony seza ao amin'ny efitrano fotsy aho," hoy i Abeer. “Tao amin'ny paositra dia te-hanodidina azy tamin'ny sarimihetsika tao an-tanàna aho, nampiditra ny fihetsiky ny fiara teo amin'ny rindriny fotsy. Nifindra avy tao amin'ny sary fakana sary mahitsy ho an'ny sary voatifitra no nanamora ny fandehanan'ny raharaha. ”
Ny "Found Lederhosen" dia horonantsary misy sarimihetsika fohy dimy sy horonantsary fanadihadiana BTS, ary hasongadina ao amin'ny HPA Tech Retreat's Supersession. Ny Supersession dia fikarohana mandritra ny roa andro ny fizotran'asa sy ny teknolojia famokarana marobe mitranga manerantany. Ireo mpanatontosa sarimihetsika "Found Lederhosen", notarihin'i Joachim "JZ" Zell, dia hampiasaina hanasongadinana ireo ohatra manerantany momba ny fitaovana, ny haitao, ny onjam-piasa ary mpanakanto 200 mahery izay niasa lavitra mba hamita ireo horonantsary fohy nandritra ny quarantine Covid manerantany.
Abeer dia nankafy ny fotoana namoronana ny "Neo-Bedouin", na amin'ny fampiasana teknolojia vaovao, fa koa satria ny fon'ny tantara dia nanakoako tamin'ny tantarany manokana. "Amin'ny maha Bedouin ahy ahy, avy amin'ny foko lehibe iray avy any an'efitra saikinosy Arabo, nahafaly sy voninahitra ny mizara ampahan'ity tontolo ity amin'ny fomba kanto, sady mizara ny fahendren'ireo vehivavy sy lehilahy matanjaka ao amin'ilay faritra tafavoaka tamin'ny fepetra sarotra natiora hananganana tontolo an-tanàn-dehibe. ”
"Neo-Bedouin" dia premiere tao amin'ny HPA TechRetreat 2021 tamin'ny volana martsa.
Sarin'ny vokatra URSA Mini Pro 12K, URSA Mini Pro G2 ary koa ny hafa rehetra Blackmagic Design Vokatra, azo jerena ao amin'ny www.blackmagicdesign.com/media/images.
KulturMachtPotsdam Arts Livestream Powered by ATEM Mini Extreme - Aprily 19, 2021
Sarimihetsika “Aza mijery” horonan-tsary mampatahotra amin'ny Pocket Cinema Camera 4K - Aprily 15, 2021
Simon Says dia nandefa ny fanitarana AI Transcription ho an'ny Adobe Premiere Pro - Aprily 15, 2021
Previous: Cooke Optics S7 / i, solomaso Full Frame Plus dia manampy amin'ny famoronana fanjakana mazika amin'ny Lahatra Netflix: The Winx Saga
Next: Kelly Stables sy David Cowgill handray ny loka MPSE Golden Reel isan-taona faha 68th